လေ့လာနိုင်သော စကြဝဠာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကမ္ဘာမှ လက်ရှိလေ့လာနိုင်သော စက်လုံးပုံစံရှိ စကြဝဠာ၏ နယ်မြေ
၁ စကြဝဠာ Vs လေ့လာနိုင်သောစကြာဝဠာ
၂ ကြယ်များအား ရေတွက်ခြင်းဖြင့် လေ့လာမှု
၃ အဝေးကွာဆုံး အရာဝတ္ထုများ
စကြဝဠာ Vs လေ့လာနိုင်သောစကြာဝဠာပြင်ဆင်
စကြဝဠာ၏ အရွယ်အစားကို မသိရပေ၊ ယင်းသည် အနန္တလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စကြဝဠာ၏ အချို့သောအပိုင်းများသည် မဟာပေါက်ကွဲမှုကတည်းက ထုတ်လွှင့်သည့်အလင်းများ ကမ္ဘာမြေရှိ ခြေရာခံကိရိယာများသို့ ရောက်ရှိရန် ဝေးကွာလွန်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် လေ့လာနိုင်သော စကြဝဠာ၏အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိနေသည်။ အနာဂတ်တွင် ဝေးကွာသော ဂလက်ဆီများ၏ အလင်းသည် ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိရန် အချိန်ပိုမိုကြန့်ကြာပေလိမ့်မည်။ မဟာပေါက်ကွဲမှုကတည်းက ပြန့်ကားသွားသော အဝေးမှဂလက်ဆီများသည် မိမိတို့ဆီရောက်ရန် အချိန်ယူရသည်။ ထို့ကြောင့် အနာဂတ်တွင် အဝေးမှ ဂလက်ဆီများအား (အရင်က မမြင်ဖူးသော) မြင်တွေ့ရပေမည်။ သို့သော် ယနေ့အခါ၌ စကြာဝဠာသည် ​စွမ်းအင်နက်ကြောင့် စကြာဝဠာပြန့်ကားနှုန်းသည် အရှိန်တင်၍ ပြန့်ကားနေသည်။ ယခုအတိုင်းဖြင့် ဆက်လက်ပြန့်ကားနေမည်ဆိုပါက အနီရောင်အရွေ့ကြောင့် အဝေးမှ ဂလက်ဆီများသည် မြင်ကွင်းမှ ထာဝရ ပျောက်ကွယ်သွားပေလိမ့်မည်။ အလန် ဂုထ် (Alan Guth) ၏ စကြာဝဠာဖောင်းပွခြင်းသီအိုရီအရ စကြဝဠာသည် မဟာပေါက်ကွဲမှုအပြီး ၁၀-၃၇ စက္ကန့်အကြာတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ယင်းအဆိုအရ လက်ရှိစကြဝဠာသည် လေ့လာနိုင်သောစကြဝဠာထက် အဆပေါင်း ၃×၁၀၂၃ ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။  အချို့ကမူ လေ့လာနိုင်သောစကြာဝဠာထက် အဆပေါင်း ၂၅၀ ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
ကြယ်များအား ရေတွက်ခြင်းဖြင့် လေ့လာမှုပြင်ဆင်
၂၀၁၁ ခုနှစ်အရ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် အဝေးကွာဆုံးသော ဂလက်ဆီသည် UDFj-39546284 ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဂါမာရောင်ခြည် လောင်ကျွမ်းမှု GRB 090423 အား တွေ့ရှိခဲ့ကာ အနီရောင်အရွေ့ ၈.၂ ရှိလေသည်။ ယင်းမှ ညွန်ပြသည်မှာ စကြာဝဠာသည် သက်တမ်းအားဖြင့် ၆၃၀ မီလီယံနှစ်သာလျင် ရှိသေးသည့်အချိန်မှ ကြယ်တစ်စင်းပေါက်ကွဲရာက ရောက်လာသော အလင်းဖြစ်ပေသည်။ ပေါက်ကွဲမှုသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃ ဘီလီယံနှစ်အကြာက ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် အလင်းနှစ် ၁၃ ဘီလီယံအား မီဒီယာများတွင် အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အနီရောင်အရွေ့ ၈.၂ ၏ မှန်ကန်သော အကွာအဝေးသည့် ၉.၂ Gpc ဖြစ်ပေမည်။ သို့မဟုတ် အလင်းနှစ် ၃၀ ဘီလီယံနှစ် ဖြစ်လေသည်။ အခြားသော အဝေးကွာဆုံးအရာဝတ္ထုမှာ Abell 2218 အလွန်မှဖြစ်ကာ ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၁၃ ဘီလီယံဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ယခုလက်ရှိ ကမ္ဘာမြေမှမြင်ရသည့် ယင်းဂယ်လက်ဆီ၏ အလင်းသည် မဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၅၀ မီလီယံမှ ဖြစ်ပေသည်။
မိမိတို့ စကြာဝဠာအား လေ့လာနိုင်စွမ်းသည် စကြာဝဠာဆိုင်ရာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားရာ စကြာဝဠာတွင် ဖြစ်ပွားသည့် များလှစွာသောဖြစ်ရပ်များအား သတင်းအချက်အလက်ရယူရာတွင် များစွာကွဲပြားလှသည်။ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးသော မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းသည် အမှုန်မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း (particle horizon) ဖြစ်ပြီး မိမိတို့မြင်ရသည့် တိကျသောအကွာအဝေးအား ကန့်သတ်ထားသည်။ ယင်းသည် စကြာဝဠာ၏သက်တမ်းကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ စကြာဝဠာသည် သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၃ ဘီလီယံဆိုပါက မိမိတို့အနေဖြင့် အလင်းနှစ် ၁၃ ဘီလီယံကျော်ထက်ပိုဝေးသော အကွာအဝေးအား မြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ပေ။ အခြားသော မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းများမှာ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော စကြာဝဠာ၏ ပြန့်ကားမှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည်အမှုန်မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လှပေသည်။
လေ့လာနိုင်သော စကြဝဠာမြေပုံ၊ ဘယ်မှညာသို့- အာကာသယာဉ်နှင့် နက္ခတ္တဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုများကို ကမ္ဘာ၏အနီးအနားပုံစံဖြင့် စီထားသည်။
↑ Itzhak Bars; John Terning (November 2009)။ Extra Dimensions in Space and Time။ Springer။ pp. 27–။ ISBN 978-0-387-77637-8။ 2011-05-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Paul Davies (2006)။ The Goldilocks Enigma။ First Mariner Books။ p. 43–။ ISBN 978-0-618-59226-5။ 1 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Planck Collaboration (2015). "Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters (See Table4on page 31 of pfd).".
↑ "The Temperature of the Cosmic Microwave Background" (December 2009). The Astrophysical Journal 707 (2): 916–920. doi:10.1088/0004-637X/707/2/916. Bibcode: 2009ApJ...707..916F.
↑ Christopher J. Conselice et al (2016). "The Evolution of Galaxy Number Density at z < 8 and its Implications". The Astrophysical Journal 830 (2). doi:10.3847/0004-637X/830/2/83.
↑ Fountain၊ Henry။ "Two Trillion Galaxies, at the Very Least"၊ New York Times၊ 17 October 2016။ 17 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gott III, J. Richard (2005). "A Map of the Universe". The Astrophysics Journal 624 (2). doi:10.1086/428890. Bibcode: 2005ApJ...624..463G.
↑ Itzhak Bars; John Terning (November 2009)။ Extra Dimensions in Space and Time။ Springer။ pp. 27–။ ISBN 978-0-387-77637-8။ 1 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lineweaver၊ Charles (2005)။ Misconceptions about the Big Bang။ Scientific American။
↑ Liddle၊ Andrew (2015)။ An Introduction to Modern Cosmology။ John Wiley။
↑ Krauss, Lawrence M. (2007). "The Return ofaStatic Universe and the End of Cosmology". General Relativity and Gravitation 39 (10): 1545–1550. doi:10.1007/s10714-007-0472-9. Bibcode: 2007GReGr..39.1545K.
↑ Alan H. Guth (17 March 1998)။ The inflationary universe: the quest foranew theory of cosmic origins။ Basic Books။ pp. 186–။ ISBN 978-0-201-32840-0။ 1 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Astronomers count the stars"၊ BBC News၊ July 22, 2003။ 2006-07-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ van Dokkum, Pieter G. (2010). "A substantial population of low-mass stars in luminous elliptical galaxies". Nature 468 (7326): 940–942. doi:10.1038/nature09578. PMID 21124316. Bibcode: 2010Natur.468..940V.
↑  Archived 27 September 2016 at the Wayback Machine.| NASA, Hubble News Release STSci - 2004-7
↑ James R Johnson။ Comprehending the Cosmos,aMacro View of the Universe။ p. 36။ ISBN 978-1-477-64969-5။ 1 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hubble Goes to the eXtreme to Assemble Farthest Ever View of the Universe" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 25 September 2012။ 17 December 2016 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ James R Johnson။ Comprehending the Cosmos,aMacro View of the Universe။ p. 34။ ISBN 978-1-477-64969-5။ 1 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New Gamma-Ray Burst Smashes Cosmic Distance Record – NASA Science. Science.nasa.gov. Retrieved on 2011-05-01.
↑ Meszaros, Attila (2009). "Impact on cosmology of the celestial anisotropy of the short gamma-ray bursts". Baltic Astronomy 18: 293–296. Bibcode: 2009BaltA..18..293M.
↑ MSNBC: "Galaxy ranks as most distant object in cosmos"။ 23 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လေ့လာနိုင်သော_စကြဝဠာ&oldid=718662" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။